Kuthetha ukuthini ukuphupha utshayela? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kubantu abaninzi kuyenzeka ukuba baphuphe ukutshayela, baphuphe betshayela isitalato, inkunkuma okanye into enjalo. Kodwa bambalwa abantu abazi ukuba ukuphupha utshayela kuthetha lukhulu ebomini bakho.
Sebenzisa ukutolika kwamaphupha yeyona ndlela inobulumko yokwenza iingxaki kwezi ntsuku zimbalwa zilandelayo ziqikeleleke. Ukongeza, amaphupha asebenza njengabacebisi abakhulu ngobomi bethu bobuqu.
Ngubani ongazange aye kufunda ukutolikwa kwamaphupha kwaye wafumana impendulo engalindelekanga eyenza umahluko? Ewe, ukwenza umkhwa wokufunda intsingiselo yawo onke amaphupha akho kunokubutshintsha nje ubomi bakho!
1 Phupha ukuba uyatshayela
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha utshayela inkunkuma?
3 Iphupha Ngokutshayela Amagqabi
4 Iphupha lokutshayela umhlaba
5 Ukuphupha ukuba utshayela isanti
6 Ukuphupha ngokutshayela ikhaphethi
Phupha ukuba uyatshayela
Ekuqaleni, ukuphupha utshayela kuthetha ukuba zonke izinto ezimbi ziya kucinywa kunye nobomi bakho kwaye uya kuba nakho ukuba nolwalamano lothando olukhulu kunye noxolo nosapho lwakho.
Siyazi ukuba ubudlelwane obuphikisanayo nosapho lwakho buvelisa usizi kunye nomsindo, ngenxa yoko kwiimeko ezininzi abantu bayanqamla.
Yazi ukuba ayizukuhlala inje nosapho lwakho, into entsha izakukuhlanganisa kwakhona. Kancinci kancinci, ubuhlobo, ubuhlobo, kunye nokuthembana kuyakwakha kwakhona ukuze yonke into ilunge, okanye ubuncinci ibengcono kunangaphambili.
Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uyayenza eyakho indima. Lixesha elifanelekileyo lokuthintela umlo kunye neengxoxo ngaphandle kwesizathu.
Kuthetha ukuthini ukuphupha utshayela inkunkuma?
Ukuba uphupha ukuba utshayela inkunkuma, oko kuthetha lukhulu malunga nomzuzu wobomi bakho, le nguqulelo ilandelwa yingcebiso enexabiso. Amaxesha amaninzi, wamkele yonke into ebekwe kuwe, kodwa namhlanje uyakwazi ukulahla konke ukungcola.
Ukutshayela inkunkuma kuthetha ukuba uyakwazi ukulahla ebomini bakho zonke izinto ezikonzakalisayo kwaye udinise ingqondo yakho.
Kubalulekile ukuba ulumke ungavumeli abantu ebomini bakho bakweyisele ukuba le yinto ekrwada okanye yokuzicingela, uzenzela konke okusemandleni akho, uhlale kude nakubani na ogweba ukhetho lwakho.
Iphupha Ngokutshayela Amagqabi
Ukuba uphupha utshayela amagqabi oko kuthetha ukuba isigaba esitsha siza kuza ebomini bakho kwaye siyakwahluka kubo bonke abanye. Musa ukoyika ukujongana noloyiko lwakho, umvuzo uza kuza kwangoko.
Kubalulekile ukwamkela utshintsho oluzayo, ngapha koko, izinto ezintle ziza nazo! Ungoyiki ukuba izakwenzeka njani, kancinci kancinci uyakuyiqhela yonke le nto.
Iphupha lokutshayela umhlaba
Ukuphupha ubutshayela umhlaba kuthetha ukuba awunazinzo ebomini bakho. Mhlawumbi uhlala ubheja kwizinto ezingaqinisekanga, ke lixesha lokuba utshintshe ukubheja kwaye ujonge izinto ezinganyamalaliyo ngexesha.
Cinga ngcono malunga nokukhetha okwenzileyo ebomini bakho, kusenokwenzeka ukuba kwixesha elizayo uza kuziphosa izinto onazo namhlanje. Funda ukucinga ngakumbi ngomso kwaye ngakumbi malunga nento oyifunayo ngobomi bakho.
Umhlaba uqhutywa ngumoya, sukuvumela okufanayo kwenzeke ngezicwangciso onazo ngobomi bakho!
Ukuphupha ukuba utshayela isanti
Ukuphupha utshayela isanti kuthetha into efana kakhulu nephupha langaphambili, kodwa ngokuchaza okunye: ubusoloko ucinga ngokonwaba okomzuzwana!
Lumka, siyaqonda ukuba ukonwabela ubomi yinto ebalulekileyo ukuze sonwabe ngakumbi, kodwa ukuba ufuna ngokwenene ukufezekisa zonke iinjongo zakho, gcinani engqondweni ukuba kuya kufuneka usebenzise lonke uxanduva lwakho.
Ngalo lonke ixesha usenza isigqibo esibalulekileyo, cinga ngakumbi ngekamva lakho kunangoku, kunokubonakala ngathi kusisiyatha kodwa kwiinyanga ezimbalwa okanye kwiminyaka iya kwenza umahluko.
Ukuphupha ngokutshayela ikhaphethi
Ukuba uphuphe ukuba utshayela ikhaphethi, oko kuthetha ukuba ubomi bakho bebuthe cwaka kakhulu kwaye ubusokola ukusitshintsha.
Ewe kunjalo, nokuba kwenzeka ntoni, uhlala kufuneka uqonde ukuba izinto aziwi esibhakabhakeni, kodwa ukuba ubunzima bakho buthintela ukukhula kwakho, nokuba kukho umzamo kwicala lakho.
Musa ukoyika ukuya kwicala lazo zonke izinto ozifunayo, kancinci kancinci, ngomgudu omkhulu, impumelelo iya kuza ebomini bakho.
Amaphupha athetha lukhulu ebomini bethu, nokuba athetha ntoni. Kubalulekile ukuba ujonge ukuba ithini intsingiselo kwaye ufumanise ukuba ingena njani ebomini bakho.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ngamaphupha kukuba zibonisa kuphela into esiyiphilayo nesiyicingayo kumhla wethu.
Ngoku ukuba uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha utshayela, uze emva koko uzifake ebomini bakho njengoko ubona kufanelekile. Umnqweno omhle!